नेपालमा सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्म बन्न उमेर हद लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण : विवेकशील साझा पार्टीका युवा नेता अब्दुस मियाँ - अडियो न्युज - Radio Kantipur
नेपालमा सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्म बन्न उमेर हद लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण : विवेकशील साझा पार्टीका युवा नेता अब्दुस मियाँ
The Headliners | Journalist Tejendra Kafle | 20 March 2019
यो बेला करीब ६० लाख युवा बिदेशमा छन्, कोही रोजगारीका लागि त कोही बसोबासको क्रममा । नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुनु र अवसर सृजना गर्ने राज्य संयन्त्र नै कमजोर भएको भन्दै बिदेशीने युवाहरुको संख्या अझै बढ्दो छ । राजनीतिप्रतिको गम्भीर बितृष्णाले नेपालमा अवसर देख्ने उनीहरुको आँखामा पट्टी लगाईदिएको छ । नेपालमा सक्रिय अधिकांश दलमा पाका नेताहरुको हालीमुहालीले पनि युवाहरु राजनीतिमा झट्ट आउन चाहिरहेका छैनन् । भनिन्छ, एउटा व्यक्ति जन्मने वित्तिकै राजनीतिज्ञ हुन्छ तर युवाहरु राजनीतिको र समेत सुन्न चाहान्न् । शुक्रवारको द हेडलाईनर्समा विवेकशील साझा पार्टीको युवा संगठनका संयोजक एवं केन्द्रीय सदस्य अब्दुस मियाँसँग आखिर युवामा यति धेरै बितृष्ण किन ? के नेपालका युवा राजनीतिमा सक्रिय हुन सक्दैनन ? राजनीतिमा युवाको प्रवेशले उनीहरुको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ ? यीनै बिषयमा कुराकानी गरेका छौं ।